ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » ပွင့်လင်း Relationships အဆင်ပြေဖို့ကိုဘယ်လို
အားဖြင့် Li ကယန်း
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ဇန်နဝါရီ. 20 2021 |3မိဖတ်ပြီးသား
"စစ်မှန်သောအချစ်သည်ခက်ခဲချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်တော်မူ၏" ဝင်တစ်ဦး Brooke သတင်းပေးပို့ Fraser သီချင်းကနေလိုင်းရှိပါတယ်. ဒီပို apt မဖြစ်နိုင်. Mills ကအတွက်မတူဘဲ & Boon ရင်ခုန်စရာတ္ထုသို့မဟုတ်ဒစ္စနေးရုပ်ရှင်တွေ, ဆက်ဆံရေးကိုအစဉ်မပြတ်စုံတွဲများနေဝင်ရာအရပ်သို့အပိတ်ကိုစီးနှင့်အတူတက်မဆုံးကြပါ. အဘယ်မေတ္တာ၏ကြေညာချက်များနောက်ကြွလာအားထုတ်မှုနဲ့ကတိကဝတ်ဖြစ်. လူသားတွေဟာမကြာခဏစုံလင်ခြင်းအဘို့အရန်ကြိုးစားကြသည်ဒါပေမယ့်အလျင်အမြန်အဟောင်းရနိုင်. ဘဝအသက်တာကအားလုံးကိုမွေးရာပါဒရာမာနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်မလိုဘဲလုံလောက်ရှုပ်ထွေး. အတိုင်းအတာ၏အခြားဘက်ခြမ်းတွင်, အခြားလူများနှင့်ချိန်းတွေ့မြင်မှပွင့်လင်းနေသောဆက်ဆံရေးကိုရှိလူများရှိပါတယ်. ဟူသောဝေါဟာရကို "ပွင့်လင်းတဲ့ဆက်ဆံရေး" ယခုအတော်လေးအချိန်အတန်ကြာလောက် bandied ခဲ့ပြီးနေစဉ်, ဆက်ဆံရေးဒီ type ဘယ်အရာပါဝင်ကြောင်း၏ကြည်လင်သောချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်အရှိဆုံးလူတို့အဘို့ရှုပ်ထွေးနေဆဲ.
အဘယ်အရာကိုအတိအကျဖွင့်ပါ Relationships Are?
အချို့ကပွင့်လင်းသောဆက်ဆံရေးအတွက်ဖြစ်ခြင်းလူတွေမျှော်လင့်ချက်များနှင့် monogamy ၏ကတိကဝတ်များ၏ဆက်ပြောသည်အလေးချိန်မပါဘဲပူးတွဲပါခြင်း၏လွတ်လပ်ခွင့်နှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေးသည်မဟုတ်ကြောင်းငြင်းဆို. တခြားသူတွေကမိတ်ဖက်အချင်းချင်းအပေါ်ခိုးချခွင့်ပြုလိုက်ရုံဖန်စီလမ်းဖွင်ယူဆကြသည်. အမြင်ဖြစ်ပါတယ်ဘာပဲ, စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ကောင်းမွန်စွာကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသည့်အခါပွင့်လင်းသောဆက်ဆံရေးအလုပ်လုပ်ကြဘူးကြောင်းပြသတဲ့အနေနဲ့ရှင်းလင်းပြတ်သားသောနိမိတ်လက္ခဏာများရှိနေပါသည်. အခြားသောဆက်ဆံရေးနှင့်ဝသကဲ့သို့, ထိုသို့လူအပေါင်းတို့သည်လူတစ်ဦးချင်းစီစေချင်တာတွေအပေါ်မူတည်. ရှင်းနေပါသည်, ဆက်ဆံရေးအဆိုပါအမျိုးအစား၌နေသောလူစိတ်နာကျင်မှုအမျိုးမျိုးနှင့်ရင်ဆိုင်နေရ၏အန္တရာယ်ရှိပါတယ်. monogamous ဆက်ဆံရေးမိတ်ဖက်မတူဘဲ, ပွင့်လင်းသောဆက်ဆံရေးအတွက်သူတို့သည် Card "သူ / သူမသည်ငါ့အပေါ်မှာလိမ်လည်လှည့်" drawing ၏ထို option ကိုမရကြ. ဒါကြောင့်ဘယ်လိုတစ်ဦးပွင့်လင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးအောင်မြင်တဲ့နှင့်ကွာရှညျခံတဦးဖြစ်ကြောင်းကိုသေချာစေလောက်သွားဘူး?
စတင်များအတွက်, ဆွဲဆောင်မှုရှိသင့်သည် - ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်မျိုးလုံး - နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကြား. နောက်ဆုံးတော့, သောသူတို့၏အမျိုးအနှစ်ဦးစလုံးပထမနေရာတွင်ဦး၌စည်းဝေးကြဖြစ်ကြောင်းအဘယ်ကြောင့်အဓိကအကြောင်းရင်းပါလိမ့်မယ်. သူတို့သည်အခြားစိတ်ဝင်စားပါတီများနှင့်အတူကိုရှာဖွေစူးစမ်းဖို့ပွင့်လင်းသူတို့ကိုယ်သူတို့ထွက်ခွာနေကြသည်ဘာလို့လဲဆိုတော့နှစ်ခုတစ်ဦးချင်းစီကသူတို့ကိုယ်ပိုင်လမ်းအတွက်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားမှကျူးလွန်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီဆိုတဲ့အချက်ကိုမှလမ်းလွဲသွားမနေသင့်. ဒီဆွဲဆောင်မှုမှအလုပ်လုပ်ခြင်း, ပွင့်လင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ရိုးရှင်းစွာတို့၏နှစ်ဦးစလုံးကြောင့်အခြားရွေးစရာကိုရှာဖွေစူးစမ်းအပေါ်နေဆဲစိတ်အားထက်သန်နေကြပါတယ်ဖြစ်စေခြင်းငှါ,. ထိုသို့, ပွင့်လင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖြစ်ခြင်းနှစ်ဖက်စလုံးဂိမ်း၏ "စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း" ကိုနားလည်ကြောင်းသေချာစေမယ့်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်. ပုံမှန် monogamous ဆက်ဆံရေးကလိုပဲ, ပွင့်လင်းသောဆက်ဆံရေးရှိသူတို့သည်အဖြစ်ကောင်းစွာမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်စံချိန်စံညွှန်းများရှိသည်မယ်လို့. အောင်မြင်တဲ့ပွင့်လင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးမှထိုစာရွက်ကိုနားလည်နိုင်နှစ်ဖက်စလုံးရှိခြင်းနှင့်တူညီစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေမှကျူးလွန်သည်.
အသက်တာ၌တခြားအရာအားလုံးအဖြစ်, ရိုးသားမှုကပွင့်လင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးဟာကြီးမားတဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်. နောက်ဆုံးတော့, ပွင့်လင်းတဲ့ဆက်ဆံရေး၏အခြေခံသည့်မိတ်ဖက်များအကြားကျန်းမာယုံကြည်မှုလည်းမရှိဟူသောအချက်ဖြစ်သည်. နှစ်ဦးစလုံးဟာအမြဲတမ်းအခြားသစ္စာဖြစ်ကြလျှင်ဤထွက်အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာမျှော်လင့်ချက်များနှင့် ပတ်သက်. စီမံခန့်ခွဲခြင်းစသည်. ပွင့်လင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက်ဖြစ်ခြင်းသင်နေရာတိုင်းကိုမြင်သောဆက်ဆံရေးကိုအခြားအမျိုးအစားရန်အလွန်ဆင်တူသည်. နေသမျှကာလပတ်လုံးနှစ်ဖက်စလုံးသူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေး၏ဒိုင်းနမစ်ကိုဘာကိုအပေါ်ညီညွတ်သောဖြစ်ကြပြီးစဉ်ဆက်မပြတ်ဒီဘုံရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သို့ဦးတည်အလုပ်လုပ်နိုင်ကြသည်အဖြစ်, ပွင့်လင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုကြာမြင့်စွာအဝုိင်းကြာရှည်မည်မဟုတ်အဘယ်ကြောင့်မလိုပါဖြစ်ပါသည်. အောင်မြင်တဲ့ပွင့်လင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းရိုးရှင်းစွာဤသူကားအ: လူတစ်ဦးချင်းစီကထွက်အဘယ်အရာကိုမျှော်လင့်ပါဘူး? ဒီ alignment ကိုအတွက်ဖြစ်မည်ဆိုလျှင်, ပွင့်လင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးသွားထား.
ဟုတ်ပါတယ်, ပွင့်လင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးလူတိုင်းအတွက်မဟုတ်ပါ. ပဲဆက်ဆံရေးကိုအခြားအမျိုးအစားတူ, ဒါကြောင့်ကြေကွဲဖွယ်အတွက်အဆုံးသတ်သွားနိုင်ပါတယ်. သို့သော်, ဒါကြောင့်လည်းအထူးသဖြင့်တစ်ချိန်တည်းမှာတခြားသူတွေကိုခရီးဦးကြိုပြုခြင်းငှါ, အခွင့်အလမ်းရှိခြင်းနေစဉ်တည်ငြိမ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်အတူဖြစ်ခြင်းမွေ့လျော်သောသူသည်လူများအဘို့အလွန်အသုံးဝင်သည့်ဆက်ဆံရေး tool ကိုဖြစ်နိုင်. အများစုကပွင့်လင်းသောဆက်ဆံရေးကတိကဝတ်များနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၏စစ်မှန်သောအဓိပ္ပါယ်ကို၏အလွန် အခြေခံ. ဆန့်ကျင်သွားသောယူဆကြသည်စေခြင်းငှါ,. သို့သော်, ပွင့်လင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက်မိတ်ဖက်ယ့်နေ့စွဲဖို့ရွေးချယ်သို့မဟုတ်အခြားလူများကိုခရီးဦးကြိုမမြတ်နိုင်ဖြစ်ရပ်များလည်းရှိပါတယ်. ပွင့်လင်းသောဆက်ဆံရေးအတွက်အောင်မြင်မှုရှာဖွေသူတွေဟာမကြာခဏရက်စွဲအခြားသူများအားလွတ်လပ်မှုအပ်ခြင်းခံရကြောင်းတွေ့ရှိအမှန်တကယ်ပိုမိုနီးကပ်စွာ၎င်းတို့၏မိတ်ဖက်ခြင်းငှါသူတို့ဆွဲယူ. ဆက်ဆံရေးကိုအဓိကအချက်ကိုအမှန်တကယ်တသူတို့ကိုပေါ်တွင်တင်မယ်လို့လေဘယ်လ်အမှတ်အသားဒါပေမယ့်အပြန်အလှန်နားလည်မှုအပေါ်အခြေခံပြီးသံကိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေချပါတီတစ်ခုချင်းစီ၏စွမ်းရည်မဟုတ်ပါဘူး.
တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်အွန်လိုင်း Dater ဖြစ်လာခြင်း၏ကြဉ်ရှောင်ကြလော့
ထိပ်တန်း4သင်ချိန်းတွေ့သိထားသင့်အကြောင်းသိကောင်းစရာများ